Ndị na-ere ahịa Forex kacha mma 2022 & Mgbanwe Cryptocurrency
Ndị na-ere ahịa Forex
Akaụntụ ngosi efu
kacha mma brokers
Broka ndị kacha ntụkwasị obi
Ndị na-ere ahịa CFD
Ndị na-ere ahịa maka ndị mbido
Ndị na-ere ahịa ECN
Ndị na-ere ahịa PAMM kacha mma
Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency
Ndị na-ere ahịa efu efu
Ndị na-ere ahịa ngwaahịa
Ugboro abụọ MT4
Ugboro abụọ MT5
Ịzụ ahịa oge a kapịrị ọnụ
Akwụkwọ mmụta kacha mma nke 2022
Jiri Kaadị zụta BTC
Zụrụ BTC Anonymous
Jiri Paypal zụta
Ego crypto niile
Ụjọ na anyaukwu
ICO na-aga n'ihu
ICO gara aga
Akpa akpa kacha mma
Best Ethereum obere akpa
Kachasị mma obere akpa Bitcoin
Litecoin obere akpa
Binance obere akpa
Ihe ngosi MT4/MT5
Ihe ịrịba ama & Robots
Chọta onye na-ere ahịa kacha mma maka gị
Anyị raara onwe anyị nye iweta ndị na-ere ahịa na-enyocha onye na-ere ahịa na-enweghị isi iji nyere ha aka ịchọta ndị na-ere ahịa Forex kacha mma, nhọrọ ọnụọgụ abụọ na mgbanwe cryptocurrency maka mkpa ịzụ ahịa n'ịntanetị ha.
Anyị nwere ọtụtụ nyocha ndị na-ere ahịa dị omimi, ọkwa na ngwa ntụnyere aka iji nyere ndị ahịa aka ngwa ngwa na ngwa ngwa ịchọpụta ndị na-ere ahịa kacha mma maka mkpa ha n'otu n'otu.
* Isi obodo gị nwere ike ịnọ n'ihe egwu
Itinye ego na Forex, CFD na FX nhọrọ gụnyere nnukwu ihe ize ndụ nke mfu na ọ dabara adaba maka ndị ọchụnta ego niile.
Depósito mínimo para
Ọtụtụ ngwa nkuzi
Lelee Ugbu a!Ahịa Olympia nke TesteLelee Ugbu a!Ahịa Olympia nke Teste
Ihe karịrị 100 akụ iji zụọ ahịa
ngwa ngwa withdrawals
ikpo okwu teknụzụ dị elu na-emeri ihe nrite
Lelee Ugbu a!ChukwudumebiLelee Ugbu a!Chukwudumebi
Nnukwu nhọrọ nke ngwá ahịa
International Awards dị iche iche
Lelee Ugbu a!Chukwunonso ChukwudeLelee Ugbu a!Chukwunonso Chukwude
Hụ ndị na-ere ahịa niile
Nlebanya ndị na-ere ahịa maka ịzụ ahịa
Ndị otu anyị amụla ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa ma wetara gị ozi kachasị mkpa na nyocha kọmpat ma zuru ezu iji nyere gị aka ime mkpebi ziri ezi ịhọrọ ndị na-ere ahịa azụmaahịa kacha mma maka mkpa gị.
Kedu ihe bụ ndị na-ere ahịa ahịa?
Onye na-ere ahịa na-ere ahịa bụ onye na-emekọrịta ihe na-enye ndị ahịa ohere ịzụrụ na ire ngwá ahịa ahịa maka obere ego ọrụ. Ha na-enye ndị ahịa na ndị na-etinye ego ohere ịnweta nyiwe ka ha wee nwee ike ịzụ ahịa n'ahịa dị iche iche dị ka Forex, ebuka, ngwa ahịa, Cryptromes, Ọdịnihu, Indices, Ọla, Ike, Nhọrọ, Bonds, ETFs, CFDs, wdg. nke na-enye ngwakọta nke ngwa ego.
Na mgbakwunye na ịnye akaụntụ azụmaahịa na ikpo okwu, ndị na-ere ahịa a na-enyekarị ọrụ ndị na-ere ahịa dị iche iche, gụnyere ihe agụmakwụkwọ, ngwaọrụ azụmaahịa, nyocha ahịa, ngwa azụmaahịa, ikpo okwu azụmaahịa mmekọrịta, na ndị ọzọ.
Kedu ka esi azụ ahịa n'ịntanetị?
Ịzụ ahịa n'ịntanetị gụnyere itinye ego na ngwaahịa ego site na iji usoro ịzụ ahịa nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-enye nke ga-enye ụdị ahịa na akụ dị iche iche dị iche iche.
Mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị, ị na-azụta (na-aga ogologo oge) ma ọ bụ na-ere (na-aga mkpụmkpụ) ngwa ego ma na-eche ma ọnụ ahịa ọ ga-arị elu ma ọ bụ ala iji gbalịa irite uru na mmegharị ahịa. Onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ dị ka onye na-emekọrịta ihe n'etiti onye na-ere ahịa na ahịa nke ha na-azụ ahịa.
Ịzụ ahịa n'ịntanetị na-adị mfe ịnweta, onye ọ bụla nwere njikọ ịntanetị nwere ike imepe akaụntụ brokerage wee zụọ ahịa n'ịntanetị site na desktọpụ, webụ na ekwentị mkpanaka trading nyiwe.
Kedu ka esi ahazi ahịa Forex?
A na-achịkwa ahịa Forex site n'iwu n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Nke a dị mkpa iji belata ohere nke wayo n'akụkụ nke onye na-ere ahịa Forex yana iji chebe isi obodo ndị na-etinye ego.
Iji banye n'ahịa interbank, onye na-ere ahịa kwesịrị ịdebanye aha naanị dị ka nzukọ na-enye ọrụ ego.
Ya bụ, inye ikike nke ndị na-ere ahịa Forex abụghị iwu. Ma ndị na-ere ahịa na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ n'eziokwu na-ele anya inweta ikike, n'ihi na ọ na-enye ndị ọrụ nkwa nke ntụkwasị obi na nchebe.
N'ezie, iji nweta akwụkwọ ikike, onye na-ere ahịa ga-emezu ọtụtụ ọnọdụ siri ike: nweta nkwenye kwesịrị ekwesị, hazie ego nkwụghachi ụgwọ, nọgide na-enwe akụkọ doro anya, wdg. A na-ekewa ikikere ndị na-ere ahịa n'ọtụtụ ọkwa.
US Deivatives Exchange Commission (CFTC) na US National Futures Association (NFA). Ndị a bụ ụlọ ọrụ na-achọsi ike, ha na-achịkwa ọrụ nke ndị na-ere ahịa ha nke ọma, ya mere ndị na-ere ahịa nwere ikikere dị otú ahụ bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Ọkwa nke abụọ
Ndị UK Financial Regulatory Authority (FSA) na Australian Securities and Investments Commission (ASIC). N'ebe a, ihe ndị achọrọ maka ịnye akwụkwọ ikike dị ntakịrị mfe, ma n'ozuzu ọ na-esiri ike ịnweta.
ọkwa nke atọ
Saịprọs Securities and Exchange Commission (CySEC) na Malta Financial Services Authority (MFSA). Ịkọ akụkọ dị mfe yana njikwa n'ozuzu ya adịghị ike maka òtù ndị a. Agbanyeghị, a na-enyekwa ikikere ha naanị ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi.
ọkwa nke anọ
British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC BVI) na Belize's International Financial Services Commission (IFSC). Ndị otu a anaghị achọ onye na-ere ahịa n'ụlọ ọrụ nnọchite anya nke ha, mana na-eme nyocha mgbe niile.
Ọkwa nke ise na nke isii
Seychelles Financial Services Authority (SFSA) na Saint Vincent na Grenadines Islands Financial Regulatory Authority (SVG FSA). Ha na-egosipụta usoro inye ikike dị mfe yana njikwa njikwa belatara.
A na-enye ndị na-achịkwa ndị a dịka ọmụmaatụ; n'ezie, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nhọrọ kacha mma bụ ịhọrọ onye na-ere ahịa nke ụlọ ọrụ tier 1 ruo 4 na-ahazi ọrụ ya; ha bụ ndị kasị ntụkwasị obi.
Mana enwere nkọwa ọzọ. N'akụkụ mpaghara, onye na-achịkwa nwere ikike iwu naanị na oke ala nke obodo ya. Nke a pụtara na ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ, onye bi na European Union na-arụ ọrụ na EU, ọ bụ naanị ndị na-achịkwa EU nwere ike ichebe ha.
Kedu ihe bụ onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi?
Mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa Forex, ọ dị mkpa ka ị ghara ịdaba na onye aghụghọ, nke a na-akpọ "ụlọ ahịa ịwụ" ma ọ bụ ụlọ ọrụ "enweghị adreesị".
Iji nyere gị aka ịmata ọdịiche dị n'etiti onye na-ere ahịa na-enweghị ntụkwasị obi na onye a pụrụ ịtụkwasị obi, anyị achọpụtala ọtụtụ ihe ịrịba ama nke onye na-ere ahịa na-adịghị akwụ ụgwọ na onye na-ere ahịa ntụkwasị obi:
onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi ndị aghụghọ
Ozi gbasara ụlọ ọrụ ahụ na-egosi uru na ọghọm niile; onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ na ndị mbido na ndị ahịa nwere ahụmahụ Ọ masịrị m ịrụ ọrụ na ndị ahịa novice, ọtụtụ ihe nkwado maka ndị mbido
E gosipụtara kọmishọna na mgbasa ozi nke ọma Kọmishọna na ịkwụ ụgwọ ezoro ezo
Enweghị nfe ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ Nsogbu na scalping na-arụsi ọrụ ike, ihe nkesa furu efu, na-amị amị ugboro ugboro
Ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ nke ọma, ndị ọkachamara tozuru oke Nkwado ndị ahịa anaghị agbachi nkịtị, enweghị ike idozi ngwa ngwa
A na-eme iwepụ ego ozugbo Nzaghachi ndị ahịa na-enwe nsogbu mgbe niile na iwepụ ego
Ụlọ ọrụ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, nnukwu ego, ikike na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nyocha dị mma Emebere ụlọ ọrụ ahụ ọhụrụ, amabeghị mmalite na nha nke isi obodo ikike, ebipụtabeghị akwụkwọ ikike ahụ, nkọwa ndị ahịa adịghị mma ma ọ bụ nkwupụta ndị ahụ dị mma mana edere ya dị ka a ga-asị na ha bụ “carbon copy”
Mara ihe ọzọ!
Ndebanye aha ngwa ngwa
AvaTrade bụ akụkụ nke ndepụta anyị nke nyiwe ịzụ ahịa mmekọrịta ọha na eze kacha mma ka ọ na-enye ndị na-ere ahịa ọtụtụ nyiwe ịzụ ahịa mmekọrịta na-apụtachaghị ìhè.
AvaTrade esorola ụfọdụ ndị na-enye akara ngosi kacha mma n'ụwa iji hụ na ndị ahịa nwere ike soro ndị ahịa kacha mma n'ebe ọ bụla ha nọ.
Ha na-enyekwa azụmaahịa na-eduzi onwe ya na nyiwe azụmaahịa nwere nghọta n'ọtụtụ ngwa ahịa 250 gụnyere forex, CFDs na cryptocurrencies.
nyiwe ịzụ ahịa mmekọrịta AvaTrade gụnyere:
Onye na-ere ahịa enyo - Nwee obi ụtọ ịzụ ahịa akwụkwọ ntuziaka, ọkara akpaaka ma ọ bụ akpaaka site na isoro ndị na-eweta mgbaàmà masịrị gị. Ị nwekwara ike idetuo algọridim trading azum mepụtara ahụmahụ ahịa ọnụ na-eduga mmepe.
ZuluTrade - Họrọ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-enye mgbama, họọrọ site na iji paramita bara uru dị iche iche, gụnyere oke drawdown na nkezi uru.
AvaTrade bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa n'ịntanetị kacha ukwuu n'ụwa n'ihe gbasara oke azụmaahịa. A na-ahazi ha na mpaghara 6 dị egwu gụnyere Europe, Australia na South Africa. Ikikere nhazi ya gbasara kọntinent ise. Nke a na-eme ka o doo anya na ị nwere ike ịme azụmahịa dị mma na nchekwa na mpaghara azụmahịa zuru oke ha na-enye.
AvaTrade na-enye usoro ikpo okwu dị iche iche nke mmekọrịta ọha na eze yana ụgwọ asọmpi, akụrụngwa azụmaahịa na-eduga na nkwado ndị ahịa mara mma.
N'ihi ihe ndị a na ihe ndị ọzọ, ha na-adị mfe na-aghọ anyị kasị mma na-elekọta mmadụ trading nyiwe.
Ihe karịrị ngwa ahịa 250
Ọtụtụ nyiwe ịzụ ahịa ọha mmadụ
Ngwa ahia ahia efu na ihe ngosi
Iwu na 6 ikike
magburu onwe ahịa nkwado
Nkwụnye ego kacha nta nke $100
Ndị ahịa Forex niile kwesịrị ịtụle ihe ndị a:
Usoro azụmaahịa: Deve haver um grande número de ativos por onde escolher, com muitos prazos de validade diferentes para escolher, deve haver um nnukwu ihe oriri de ativos por onde escolher. Deveria haver pelo menos dois instrumentos diferentes para escolher, embora muitos corretores ofereçam mais do que isso. Ọ bụrụ na ị chọrọ,
Idiomas na Plataforma: Isto será mais importante do que alguns do que outros. I nwere ike ịsụgharị Todas dị ka plataformas são fornecidas em inglês, mas dị opções linguísticas adicionais podem variar muito. Verifique se o 'website' ea plataforma são fornecidos no seu idioma nativo.
Depósito otu: qual é o custo para começar a negociar? Os corretores não cobram taxas por negociação, pelo que todos os fundos depositados podem ser utilizados para negociar. Cor O depósito anyị nwere otu ụzọ dị $ 10 na $ 300. Qualquer montante que exceda isto é Accradorado acima da média.
Nhọrọ ụlọ akụ: Gị usoro ụlọ akụ ọkachamma ka a na-enye? Ekwesịrị ịza ajụjụ a na mmalite nke usoro nyocha, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-achọ onye na-ere ahịa ọzọ.
Ego na nkwalite: Ego ego ruru 100% na-enye ụfọdụ ndị na-ere ahịa. Ndị a ga-abịa na ọnọdụ ndị a ga-emezurịrị tupu ịwepụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ego nrịbama na nkwalite ndị ọzọ nwere ike inye ego akaụntụ ego nkwalite dị mma.
Nkwado ndị ahịa: Um gestor de conta dedicado pode ou não ser fornecido, mas todos os ganacsatada devem ter acesso a apoio ao cliente. As Consérações nesta área incluem os métodos de contato disponíveis e as horas durante dị ka quais o apoio é prestado.
Dị ka escolhas de Ndị na-arụ ọrụ dị ga-agụnye ma ụlọ ọrụ ọhụrụ ma guzosie ike. A na-ahazi ọtụtụ, ebe ụfọdụ enweghị ike ịbụ n'ihi ọnọdụ ha.
Ọ bụ eziokwu pụtara na ndị na-arụ ọrụ na nnukwu onye na-ere ahịa na-enweta ego kachasị ma na-enweta nsogbu ole na ole.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike inwe mmasị ịmalite, enwere ọtụtụ uru iwepụta oge iji họrọ nke kacha mma. onye na-ere ahịa nke Forex.
Gịnị bụ Forex ahịa?
Nke a bụ ahịa mgbanwe mba ofesi na-achịkọta ọrụ ego nke ụlọ akụ niile na otu mba ụwa. Usoro akụ na ụba kasị ukwuu n'ụwa dị onye ọ bụla.
Kedu ka esi amalite ịzụ ahịa na Forex?
Ebe ọ bụ na mmadụ enweghị ike ịghọ onye so na ahịa, onye na-ere ahịa kwesịrị ịdebanye aha na onye na-ere ahịa Forex. Onye na-ere ahịa na-enye onye na-ere ahịa ọnụ ahịa ahịa, ngwá ọrụ ịzụ ahịa na ohere ịzụ ahịa Forex niile.
Enwere nhọrọ ego ego Forex na-agafe agafe?
Ee. Onye na-ere ahịa nwere ike itinye ego na obere ihe egwu na akaụntụ PAMM/LAMM, nke ndị ọkachamara n'ahịa na-achịkwa. Enwere atụmatụ ndị ọzọ dị ka njikwa ntụkwasị obi na detuo ọrụ azụmaahịa.
Kedu ka ahịa Forex siri dị mma?
Dị ka trading na-eme dị ka ụdị nke oke, e nwere mgbe ihe ize ndụ na ibido ọ bụ nnọọ elu. Mana ndị na-ere ahịa na-enye ọtụtụ ohere dị irè maka ịdị iche iche ihe egwu, dịka ọmụmaatụ Pọtụfoliyo PAMM. Ọzọkwa, ego nkwụghachi ụgwọ mberede.
Nkeji edemede ọnụọgụ abụọ nhọrọ
Nata akwụkwọ akụkọ
Ndị na-ere ahịa e depụtara na webụsaịtị agafeela ọtụtụ nyocha na nyocha miri emi.
Ebumnuche anyị bụ ịnye nyocha enweghị mmasị na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị iji nye ndị ahịa nghọta doro anya nke ndị na-ere ahịa dị iche iche dị. Ndị na-ere ahịa nwere ike iji ọrụ anyị n'efu, mana ha kwesịrị ime nlezianya nke ha ma mee mkpebi nke ha mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke dabara na mkpa nke onye ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime data anyị enyochala ozugbo site n'aka ndị na-ere ahịa a, ọ nwere ike ịdịgasị iche site n'oge ruo n'oge. Anyị abụghị maka ozi na-ezighi ezi ma ọ bụ nke emechiela na nyocha nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa anyị n'ịntanetị ma ị ga-akwadorịrị data niile na onye na-ere ahịa ozugbo. Ọnụego, usoro, ngwaahịa na ọrụ dị na webụsaịtị ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa.
Nkwupụta nke ibu
Forexdigital.net bụ maka ebumnuche ozi naanị na ebughị n'obi maka nkesa ma ọ bụ jiri onye ọ bụla na obodo ọ bụla ma ọ bụ ikike ebe nkesa ma ọ bụ ojiji dị otú ahụ ga-emegide iwu ma ọ bụ iwu mpaghara. Weebụsaịtị a anaghị enye ndụmọdụ itinye ego, ọ bụghịkwa onyinye ma ọ bụ arịrịọ ụdị ọ bụla ịzụta ma ọ bụ ree ngwaahịa itinye ego ọ bụla. Enwere ike kwụọ anyị ụgwọ site na ndị mgbasa ozi nke atọ. Agaghị ahụ nkwụghachi ụgwọ a dị ka nkwado ma ọ bụ ntụnye sitere na forexdigital.net, ma ọ bụkwanụ emetụta ọkwa ndị na-ere ahịa anyị.
CFDs, Forex, Cryptocurrencies na ngwa ego ndị ọzọ na-ebu nnukwu ihe ize ndụ nke ịla n'iyi ngwa ngwa n'ihi itinye ego. Ndị na-enye ọrụ niile nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-etinye ego na-ere ahịa na-atụfu ego mgbe ha na ụlọ ọrụ ha na-ere CFD na ngwa ego ndị ọzọ. Ịkwesịrị ịtụle ma ị ghọtara ka CFDs, Forex, Cryptocurrencies si arụ ọrụ yana ma ị nwere ike ịlafu ego gị. Adịla etinye ego ị na-agaghị enweli ida.
Nwebiisinka © 2022 — Forexdigital.net Ikike niile echekwabara.
Chekwaa ma nabata